» कोरोना भाईरस अपडेट– कुन देशमा कति जना संक्रमित, कति मृत्यु ?
कोरोना भाईरस अपडेट– कुन देशमा कति जना संक्रमित, कति मृत्यु ?
२६ फाल्गुन २०७६, सोमबार १२:५४
मकवानपुर, २६ फागुन । आदरणीय दर्शकविन्द, कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण हाल विश्वभरि फैलिरहेको छ । कोरोना भाईरसको त्रासकै कारण पनि विश्व त्रसित बन्दै गईरहेको छ । तर कोरोना भाईरससँग डराएर होईन सचेत भएर सुरक्षित रहने प्रयास गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । यस भिडियो सामग्रीमा मार्च ८ तारिखसम्ममा विश्वमा कोरोना भाईसको संक्रमण कति पुग्यो ? कति जनाको मृत्यू भयो अनि कुन देशमा यसको प्रभाव कस्तो छ ? यस बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । यस भिडियोमा प्रयोग गरिएका कोरोना भाईरसबाट संक्रमित तथा मृत्यू भएका संख्याहरु विश्व स्वास्थ्य संगठन र बिबिसीमा दिइएका समाचारहरुमा आधारित छन् । यी आधिकारिक संख्याहरु प्रकाशित भएको समयभन्दा पछि तपाई भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसको संख्या बढेको पनि हुनसक्छ । सुरु गरौँ विश्वमा कोरोनाभाईरसको संक्रमको अवस्था बारेको यो भिडियो । सन् २०२० मार्च ८ सम्मको तथ्यांक अनुसार चीनबाट सुरु भएको कोभिड–१९ भाईरस संक्रमण एक लाख नाघेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार पुष्टि भएका कुल संक्रमणको संख्या विश्वमा १ लाख ५ हजार ४ सय ३० पुगेको छ भने मृत्यू हुनेहरुको संख्या ३ हजार ५ सय ९२ पुगेको छ । चीनमा कुल संक्रमण ८० हजार ८ सय १४ र मृत्यू हुनेहरुको संख्या ३ हजार १ सय पुगेको छ । दक्षिण कोरियामा ७ हजार १ सय ३४ लाई संक्रमण भएकोमा ५० जनाको मृत्यू भएको छ । इटलीमा ५,८८३ जना संक्रमित भएकोमा २३४ जनाको ज्यान गएको छ । ईरानमा ५,८२३ संक्रमित भएकोमा १४५ जनाको ज्यान गएको छ । जर्मनी ७९५ लाई संक्रमण भएको छ । फ्रान्समा ७०६ लाई संक्रमण भउकोमा १० जनाको ज्यान गएको छ । डायमन्ड प्रिन्स जहाजमा ६९६ लाई संक्रमण भएकोमा ७ जनाको ज्यान गएको छ । हेर्नुहोस् विस्तृत जानकारी सहितको यो भिडियो–
त्यस्तै जापानमा ४५५ लाई संक्रमण भएकोमा ६ जनाको मृत्यू भएको छ । स्पेनमा ३७४ लाई संक्रमण भएकोमा ५ जनाको ज्यान गएको छ । स्विटजरलैंडमा २६४ लाई संक्रमण भएकोमा २ जनाको ज्यान गएको छ । टीम यूएसएमा २१३ जना संक्रमित भएकोमा १९ जनाको ज्यान गएको छ । संयुक्त अधिराज्यमा २१० जनामा संक्रमण भएकोमा २ जनाको ज्यान गएको छ । नेदरलैंड्समा १८८ जनामा संक्रमण भएकोमा १ जनाको ज्यान गएको छ ।बेल्जियममा १६९, स्वीडेनमा १६१,नर्वेमा १४७,सिंगापुरमा १३८,मलेसियामा ९३ र अष्ट्रियामा ७९ जनामा संक्रमण देखिएको छ । अस्ट्रेलियामा ७४ जनामा संक्रमण देखिएकोमा	३ जनाको मृत्यू भएको छ । ग्रीसमा ६६, कुवेतमा ६१ र क्यानडामा ५७ जनामा संक्रमण भएको छ । त्यस्तै इराकमा ५४ जनामा संक्रमण भएकोमा ४ जनाको ज्यान गएको छ । थाईल्याण्डमा ५० जनामा संक्रमण भएकोमा १ जनाको ज्यान गएको छ । बहराइनमा ४९ र आइसलैंडमा ४५ जना संक्रमित भएका छन् । चाइनीज ताइपेईमा ४५ जनामा संक्रमण देखिएकोमा १ जनाको मृत्यू भएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स ४५, भारतमा ३४, डेनमार्कमा ३१, सैन मरीनोमा २७, चेक गणतन्त्रमा २६, लेबनानमा २२, ईजरायलमा २१, भियतनाममा २१, ब्राजीलमा	१९, फिनल्याण्डमा १९, आयरलैंडमा १८, अल्जीरियामा १७, वेस्ट ब्याङ्कमा १६, ओमानमा १६, इजीप्टमा १५, इक्वेडोरमा	१४, पोर्चुगलमा	१३, जोर्जियामा १२, कतारमा १२, क्रोएशियामा ११ र एस्टोनियामा १० जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
त्यस्तै अर्जेंटीनामा ९ जनामा संक्रमण भएकोमा १ जनाको ज्यान गएको छ । अजरबैजानमा ९ जना, रोमेनियामा ९, स्लोभिनियामा	९, साउदी अरबमा ८, रुसी फेडरेशनमा ७, बेलारूसमा ६ र पेरुमा ६ जनामा संक्रमण देखिएको छ । फिलीपिन्समा ६ जनामा संक्रमण भएकोमा १ जनाको ज्यान गएको छ । पोल्याण्डमा ६, चिलीमा ५, कोस्टा रिकामा ५, फ्रेञ्च गियानामा	५, हंगेरीमा ५,मेक्सिकोमा ५,न्यूजीलैंडमा ५, पाकिस्तानमा ५, अफगानिस्तानमा ४, सेनेगलमा ४, एफवाईआर मेसेडोनियामा ३, स्लोभाकियामा ३, बोस्निया एण्ड हर्सगोभिनामा २, बुल्गेरियामा	२, कंबोडियामा २, क्यामरुनमा	२, इंडोनेशियामा २, लक्जमबर्गमा	२, मालदीभ्समा २,मार्टिनिकमा २ र मोरक्कोमा २ जना संक्रमित भएका छन् ।
त्यस्तै सेन्ट मार्टिन (फ्रान्स) मा २ जना, दक्षिण अफ्रीकामा २, एण्डोरामा १, आर्मीनियामा १, भूटानमा १,	कोलंयिबामा १, डोमिनिकन रिपब्लिकमा	१, जिब्राल्टरमा १, भ्याटिकनमा १ जना संक्रमित देखिएका छन् । जोर्डनमा १ जनामा संक्रमित भएकोमा उनको ज्यान गएको छ ।	लिखटेन्सटाइनमा १, लिथुएनियामा १,माल्टामा १,मोल्डोभामा १,मोनेकोमा १ जना संक्रमित भएका छन् । नेपालमा	१ जनामा संक्रमण भएको पुष्टि भएता पनि उनी पुर्ण रुपमा निको भईसकेको बताइएको छ । नाइजीरियामा १, सेन्ट बार्थेलेमीमा १, सर्बियामा १,	श्रीलंकामा	१, टोगोमा १, ट्यूनीशियामा १ जना र यूक्रेनमा १ जनामा कोरोना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ । आदरणीय दर्शकविन्द, कोरोना भाईरससम्बन्धी यो तथ्यांक विश्व स्वास्थ्य संगठन र बिबिसीले उपलब्ध गराएको जानकारीमा आधारित छ । यो भिडियो अपलोड भईसकेको समयमा पनि यो तथ्यांकमा थपघट भईसकेको हुनसक्ने भएकोले अन्यथा नसोचिदिनु होला । यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो ? कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोला ।
यी हुन् रचना रिमालको आउँदै गरेको २ गीत
प्रविण र रचनाको दोस्रो डुयट गीत आउँदै
बहुचर्चित गीत गाएपछि प्रविण र रचना यसो भन्छन्
डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा भिडिरहेका ११ जोडीहरु
डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा भिडिरेका ११ कोरियोग्राफरहरु